Oriakụ Okwuefuna, bụ onye gbara ahọ iri atọ na asatọ, ka a kọwara na ọ pụrụ n'abalị atọ nke ọnwa Epure ahọ a gaba n'ugbo ya dị n'Agụ Ụmụnebo, Nteje, bụzị ebe ndị Fulani na-achị ehi wakporo ya, kee ya agbụ, kwaso ya iko n'ike ma gbuo ya.
Na nkenke okwuchukwu ya n'ofufe nro akwamozu ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ụka Sacred Heart Parish Nteje, onye ụkọchukwu Peter Okolo kwuru na ebumnobi Chineke jiri kee mmadụ bụ ka o wee mara ya, hụ ya n'anya, ma kpeere ya ruo ebighị ebi; ma kwazie arịrị na ụmụ mmadụ ekweghị ewere onwe ha nyefee Chineke n'aka, ọbụnadị dịka o kwuru na ọ bụ ka onye siri bie ndụ ya ga-akọwa ebe ọ ga-aga n'ụbọchị ikpe azụ.
Ọ kwara arịrị na ndị Fụlani na-achị ehi emeela ọtụtụ ụmụ mmadụ ihe obi mgbọwa na akwa arịrị na mpaghara ebe dị iche iche n'ala anyị, ma kpọkuo onyeisi ala bụ Muhammadụ Buharị ka o bilie ugbu a ma mee ihe a na-atụ anya n'aka ya, iji gbochie ọnọdụ ọjọọ ahụ.
N'okwu nke ya, eze ọdịnala obodo Nteje, bụ Igwe Rowland Odegbo, kwara arịrị banyere ihe egwu ahụ dakwasịrị obodo ahụ nakwa otu ndị Fụlani na-achị ehi si egbusi ehi n'ala anyị, ma kọwaa na gọvanọ Obianọ eguzobela òtù ga-elèba anya banyere ọnọdụ ọjọọ ahụ, ma bụrụkwa ndị gbara mbọ pụrụ iche iji hazie akwamozu ahụ.
Ọ dụrụ ụmụnwaanyị obodo ahụ ka ha na-eso n'ìgwè wee na-aga n'ubi, ma kpọkuo ndị gọọmenti na ndị aka ji akụ ka ha nye aka n'ịzụ ụmụ ise nke nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ hapụrụ were laa mmụọ.
Onyeisi "Nteje Development Union" bụ chiifu Benneth Nweze kọwara ndị Nteje dịka ndị na-akọ ugbo nke ukwu, ma kwaa arịrị nke ukwuu na ọnọdụ ọjọọ ahụ etinyela ụjọ n'obi onye ọbụla.
N'akụkụ nke ya, nwanne nwaanyị onye ahụ nwụrụ anwụ, bụ Benedeth Mmadụka kwuru na nwanne ya nwaanyị ruru ụjụ ọnwụ di ya nso nso a, nke a wee dakwasịkwa ya; ma kpọkuo gọọmenti ka o mee nnyocha pụrụ iche iji nwụchikọọ ndị rụrụ ala ahụ.